Ukulahla iSuper Bowl yeDijithali Media
NgoMgqibelo, Disemba 26, 2009 NgoLwesihlanu, ngoJuni 9, i-2017 Douglas Karr
Ibhola lebhola laseMelika liyasondela
Ayanda amabhizinisi amukela ubuchwepheshe uma kukhulunywa ngamasu awo wokumaketha. Nini UPepsi ukhiphe iSuper Bowl, izintatheli zendabuko zayibiza kanjalo ukugembula.
Ukungakhangisi ku-Super Bowl kuwukugembula? Ngempela?
Isikhangiso se-Super Bowl sibiza ama- $ 3 million dollars ngemizuzwana engama-30. UPepsi uhlele izikhangiso ezimbili ezingama-secoond ezingama-30 kanye nesikhangiso sesibili esingu-60… lokho kungu- $ 12 million. Futhi intengo yenyuka ngaphezu kuka-10% phakathi kuka-2008 no-2009. Masenze izibalo. Lokho yi- $ 12 million ukufinyelela izibukeli eziyizigidi ezingama-98 .. noma cishe u- $ 0.12 ngombukeli ngamunye.
Masingakukhohlwa lokho Inzuzo yePepsi yehle ngamaphesenti angama-43 ngenkathi empeleni wenza khokhela izikhangiso ze-Super Bowl. Hmmm, kuzwakala sengathi izikhangiso zeSuper Bowl azikhokhanga neze.
Lokhu akubandakanyi, kunjalo, ukugembula kwangempela… Ukuqasha inkampani engakhiqiza ezentengiso ezizoshayela impela amathani omgwaqo kumkhiqizo wakho. Ake senze sengathi itoti ngalinye lesoda lizuze u- $ 0.10… lokho kusho ukuthi izikhangiso zikaPepsi kufanele zishayele ngamunye walabo babukeli ukuthi athenge okungenani iPepsi eyodwa (ngaphezu kwama-sodas ayizigidi eziyi-100) ukumboza izindleko zesikhangiso.
Lokho akwenzekanga, futhi bekungeke kwenzeke.
Ngokuphambene nalokho, ngokwamukela imidiya yedijithali, uPepsi angatshala imali kubuchwepheshe begciwane noma bezenhlalo ngenani elincane lezindleko no-rngamunye inani elifanayo lababukeli. Vele bekungeke kwenzeke emcimbini owodwa emizuzwini emi-2… kepha ngubani engqondweni yabo ongathanda ukuthi afune ukwenzenjalo? UPepsi udinga isu lesikhathi eside neminye imikhiqizo emihle ukuyibuyisa.
Kuthiwani uma uPepsi exhasa umncintiswano 'omuhle kakhulu wokukhangisa ngegciwane' lapho owinile ezuze khona i- $ 1 million? Ngolunye u- $ 1 million emiklomelweni eyengeziwe? Mhlawumbe bakhuphule umncintiswano kuyo yonke i-Youtube, i-Twitter kanye ne-Facebook ngokutshalwa kwemali okungeziwe kwe- $ 1 million.
Iyiphi inqubo ocabanga ukuthi ingafinyelela kakhulu… futhi ngezithameli ezifanele nomyalezo? Ubuchwepheshe nokumaketha kuyahlanganiswa ngokwengeziwe futhi isikhathi sazo lapho izinkampani eziningi zivule amehlo azo kumathuba amangalisayo akhona.
Inothi njeAngazi, nganoma iyiphi indlela, ngiphikisana ngokuthi ziyasebenza noma cha izikhangiso zeSuper Bowl. I-GoDaddy ibe nempumelelo enkulu eminyakeni edlule ekutholeni isabelo semakethe sokubhaliswa kwesizinda nge ezinye izimakethe ezingenangqondo. Lesi yisibonelo esihle sokuthi ayisebenzi nini namathuba okwandisa inzuzo ekubekeni imali ngemidiya yedijithali.
Enye inothi: Ngicabanga ukuthi uPepsi naye udinga ukuyilahla i-logo entsha. Kuyisimungulu.
Tags: ukukhangisacommerciali-pepsiisitsha esikhulu
Kwesinye isikhathi Amalahle Okukhangisa Akhiqiza Amadayimane
Dec 26, 2009 ngo-9: 59 PM
Ngicabanga ukuthi kuwumqondo ongcono kakhulu futhi ohlala isikhathi eside ukuthi ungenzi izikhangiso zeSuper Bowl bese usebenzisa imali kwenye indawo. Mt. Umbethe usuvele unomcimbi wevidiyo odale umsebenzisi, futhi beza nokuqukethwe okuhle kakhulu. Mayelana nelogo, uPepsi ekugcineni uzama ukungena kwezakhe, esikhundleni sokungqongqoza ifonti kaCoke. Ngiyazibuza ukuthi ngubani oqhamuke neLogo kuqala nokho, iqembu lomkhankaso wePepsi noma lika-Obama. I-logo uqobo lwayo kubonakala ngathi ayimele lutho.